पढेको कुरा सम्झन चाहनुहुन्छ ? यस्तो छ १० सुत्र « LiveMandu
९ मंसिर २०७५, आईतवार १६:३२
हामीहरु कुनै पुस्तक पढ्न चाहि पढ्छौ तर पढेको कुरा कति स्मरणमा रहन्छ त ? अवस्य पनि कमै मात्र पढेको कुरा सम्झन्छौ हैन त? आज भोलि मानिसहरुलाई धेरै समय पढेर बस्ने समय नै छैन त्यसैले कम समयमा धेरै कुरा पढ्नको लागी बिभिन्न उपायहरु अपनाउन आवस्यक छ । पढेको कुरा कसरि सम्झने भनेर goconqr ले गरेको गरेको रिसर्च यसप्रकार छ